Maareynta dhiigga: Waxa la rabo Inaad ogaatid | Somali | Blood management: What you need to know
Waxa aad u baahan tahay Inaad ka ogaatid dhiigga
English: Blood management: What you need to know
Waa maxay maareyn dhiig?
Sida loo isticmaalo dhiiggaaga waxay muhiim u tahay caafimaadkaaga iyo bogsashadaada.
Ogaanshaha inaad u baahan tahay dhiig-ku-shubid lagu beddelo dhiig kaa lumay, iyo waxa ay yihiin anfacyadu iyo halistu, waxay kaa caawin doontaa in adiga iyo dhakhtaarku ad gaadhaan go'aan warqabid leh oo ku saabsan daryeelka kuugu fiican.
Kooxdaada daryeelka caafimaadka ayaa maamuli doonta dhiiggaaga ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib qalitaankaaga ama hawlgalka. Tani waxay:
caawimaad ka geynsan doontaa in laga hortago dhiig-yaraanta (fiiri qaybta soo socota)
waxay yareyn doontaa dhiigidda
waxay kaa caawin doontaa inad u bogsatid dhakhso ama si ka fiican
waxay hubin doontaa in dhabtii loo baahan yahay dhiig-ku-shubidda
waxay caawimaad ka geysan doontaa in la tashiilo kaydka dhiigga ee beesha
waxay yareyn doontaa kharashka daryeelkaaga
waxay gargaar ka geysan doontaa in hoos loo dhigo halistaada inad qaadid caabuq, cudur sida cagaarshow/joonis nooca C, ama cilado kale (saameynno)
Kooxdaada daryeelka caafimaad ayaa si weyn uga shaqeyn doonta in dhiigga kaa lumaya la yareeyo intii suurtogal ah. Haddii wax badani kaa lumaan, waxa laga yaabaa inad u baahatid dhiig-ku-shubid.
Waa maxay sababta ad ugu baahan kartid dhiig-ku-shubid?
Inta lagu jiro dhiig-ku-shubid, waxa lagu siinayaa dhiig u dhigma nooca dhiiggaaga. Tani waa hab lagu beddelo dhiigga:
luma inta lagu jiro qalitaan, dhaawac, jirro ama umul
haddii ad qabtid dhiig-yaraan. Dhiig-yaraantu waa xaalad aanad lahayn unugyo dhiig oo cascas oo ku filan inay oksijiinta u qaadaan dhammaan jidhkaaga. Tani waxay sababi kartaa inad dareentid daal, tabcaannimo ama dawakh.
Haddii ad qabtid dhibaatooyin xinjirow. Waxa laga yaabaa inad in badan dhiigtid ama si fudud u dhiigtid.
Waa maxay qaybaha dhiiigga ee la isticmaali karo?
unugyo dhiig oo cascas (unugyada loo isticmaalo dhiig-yaraan ama dhiigid)
balataleetyo (platelets) (unugyo isku urura si ay jidhkaaga uga caawiyaan inuu joojiyo dhiigidda)
balaasma (plasma) (qaybta ah hoore ee dhiigga ee dhiiggaaga ka caawisa inu xinjiroobo)
cryoprecipitate (waa borootiin ku jira balaasma oo loo isticmaalo dhiigidda)
Waa maxay ikhtiyaaradda ad haysatid?
Waxa laga yaabaa in laguu sameeyo dhiig-ku-shubid ka hor ama inta lagu jiro qalitaan, ama inta lagu jiro joogitaankaaga cisbitaalka ee ad bogsanaysid.
Wada-jir, adiga iyo dhakhtarkaaga ayaa go'aan ka gaadhi doona ikhtiyaarka adiga kuugu fiican.
Deeq dhiig oo ka timid qof aan waxba la isu ahayn (allogeneic)
Kani waa dhiig uu diiqay qof caafimaad qaba. Aqoonsiga qofka lama yaqaano. Dhiigga waxa loo baadhaa si taxadir leh loona tijaabiyaa si loo hubiyo inu ammaan yahay.
Deeq dhiig oo ka timid qof qaraabo ama saxiib ah
Qof qoyska ah ama saaxiib oo ad isku nooc dhiig tihin ayaa kugu deeqi kara dhiig. Noocan deeq dhiig lama xaqiijin inu ka ammaan badan yahay kaydka dhiigga ee beesha guud.
Dhiigga qofku sii dhigtay (autologous)
Waxa ad bixin kartaa dhiiggaaga ka hor qalitaanka. Tani caadi ahaan laguma taliyo. Waxa ka iman kara dhiig-yaraan hoosna uma dhigayso halista inad u baahatid dhiig-ku-shubid.
Ikhtiyaarada inta lagu jiro qalitaanka waxa ku jira kuwan soo socda.
Xoogaa dhiig ah ayaa la saarayaa oo lagu beddelayaa hooreyaal IV (xidid ka siin). Dhiiggaaga waxa jidhkaaga lagu soo celinayaa ka dib qalitaanka.
Dhiigga kaa luma inta lagu jiro qalitaanka waa la ururiyaa, la nadiifiyaa oo lagu soo celiyaa jidhkaaga ka dib qalitaanka.
Dhiig-yaraanta oo la daweeyo ka hor qalitaanka
Haddii ad qabtid dhiig-yaraan, waxa laga yaabaa in dhakhtarkaagu kuu qoro dawooyin gaar ah (sida bir ama fitamiinka B12) oo jidhkaaga ka caawin doona inu sameeyo unugyo dhiig oo cascas oo kale. Tani waxay caawimaad ka geysan kartaa in laga hortago baahida dhiig-ku-shubis.
"Dhiig Daadasho La'aan"
Kooxdaada daryeelka caafimaadku waxay isticmaalaysaa qalab ama farsamooyin gaar ah si looga hortago baahida isticmaalidda dhiig dheeraad ah.
Waa maxay halista dhiig-ku-shubistu?
Dhiig-ku-shubistu waxay badbadin kartaa noloshaada. Balse waxa kale oo ay leedahay halisyo. Bukaan badan ayaan lahayn wax ah saameyn ka dib dhiig-ku-shubis. Diidmooyinka jidhku waa dhif, balse way dhacaan.
Astaamaha diidmada jidhka waxa ku jira:
maqaar midabdoorsoomay (maqaarka wajiga iyo qoorta oo casaaday)
furuuruc ama finan
calool qasan (yalaalugo) ama matagid
xanuun ah dhabarkaaga, laabta ama cududaha
garaac wadne oo dhakhso ah
dareen ah daal ama dawakh
Haddii ad qabtid mid ka mid ah kuwa sare, u sheeg qof ka tirsan kooxdaada daryeelka caafimaadka isla markiiba.
Waxa laga yaabaa inad yeelatid diidmo jidh oo daahday maalmo ama todobaadyo ka dib dhiig-ku-shubista. Isla markiiba wac bixiyahaaga daryeelka caafimaadka haddii ad qabtid:
Su'aalaha la weydiiyo dhakhtarkaaga
Kooxdaada daryeelka caafimaadku waxay ka shaqeyn doonaan inay maamulaan dhiiggaaga iyaga oo isticmaalaya dawooyin iyo farsamooyin qalitaan si jidhkaaga looga caawiyo inu sameeyo unugyo dhiig oo cascas oo loo yareeyo lumis dhiig.
Dhakhtarkaaga kala hadal sida dhiiggaaga loo maamuli doono inta lagu jiro qalitaanka.
Su'aalaha la weydiiyo ka hor qalitaanka waa:
Ma u baahan doonaa dhiig-ku-shubis?
Waa maxay halisyada dhiig-ku-shubis?
Waa maxay halisyadu haddii an doorto in aan la ii sameyn dhiig-ku-shubis?
Maxaa u dhakhtarkaygu diyaar u yahay inu qabto si gargaar looga geysto in laga hortago dhiig-ku-shubis?
Maxaa la sameyn karaa ka hor qalitaanka si loo yareeyo halistayda dhiigista iyo baahida dhiig-ku-shubis?
Sidee dhiig-ku-shubis u saameyn kartaa bogsashadayda?
Source: Allina Health's Patient Education Department, Waxa Aad u Baahan Tahay Inaad ka Ogaatid Dhiigga, blood-somali-ahc-13319
First Published: 11/15/2004